IiAerosols, ezo ntwana zithanda isiphumo sendawo yokugcina | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Los i-aerosol iyatyabeka zingamasuntswana amancinci akhoyo emoyeni. Banoxanduva lokuyilwa kwamafu kwaye, kwangaxeshanye, banegalelo kwimpembelelo yendlu eluhlaza kunye Ukufudumeza Imozulu.
Los i-aerosol iyatyabeka Zikhona ngokwendalo emoyeni. Banokuvela kwimililo yehlathi okanye kuqhushumbe-mlilo, umzekelo, kodwa nakukutsha komlilo izibaso iifosili. Nokuba yeyomntu okanye yendalo, la masuntswana acocekileyo, phakathi kwezinye, anakho ukukhuthaza umphumo wemingxunya kulweleko lwe-ozone.
Badlala indima ekwenziweni kwamafu, ukuguqula ukwakheka kwabo okanye ubunjani babo kwaye ke bathathe inxaxheba kwisiphumo sokugcina, ngokungaphezulu okanye ngaphezulu njenge-CO. ICalypso, isathelayithi I-CnesUbajongile iminyaka eli-9 ngethemba lokuqonda ngqo ifuthe labo. Esi sixhobo sikwazi ukulinganisa ngokuchanekileyo iimpawu zeengqimba ezahlukeneyo ze iatmosfera.
I-Cnes yindawo yoluntu ejongene nokubonelela nokuqhuba umgaqo-nkqubo wendawo yaseFransi eYurophu. Idalwe ngo-1961, i I-Cnes Qulunqa iinkqubo zesathelayithi kunye nabaqalisi bangomso abaphendula kwiimfuno zoluntu. I-Cnes idlala indima ephambili kwi imeko isithuba nyesizwe, IYurophu kunye namazwe aphesheya ingamandla aqhubayo, izinto ezintsha ukuze kuzuze ingqesho, kunye neziko u buchule ubuchule. Ngobudlelwane obusisigxina namagunya oluntu kunye noluntu lwenzululwazi nolweshishini, luyazilungiselela kwaye luzenze iprogram indawo ezintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Faka co2 » IiAerosols, ezo ntwana zithanda ukusebenza kwendlu eluhlaza
ISchlierberg, indawo yaseJamani apho kuveliswa khona amandla angaphezu kwama-4 kunalawo asetyenzisiweyo
Zili-100 kuphela izingwe ezisele kumgxobhozo we-Sundarbans delta mangrove